Umqondo onjalo njengezingubo zeqembu futhi ikakhulukazi izingubo zezinkampani zabesifazane zavela maduzane. Ayikho isitayela esifanayo kule dress, kodwa ihlanganiswe umgomo ovamile - ukuheha. Ngenxa yalokhu, izingubo zeqembu zivutha kakhulu, zivule izibonelo eziningi ezingenangqondo. Kufanele bagcizelele ukukhangiswa komnikazi futhi babelane kusukela esixukwini.
Izembatho zeClub ziyinhloko yabantu abasha abahola ukuphila okusebenzayo, bathanda ukukhulumisana kanye nokuphola, bajabulele ama-novelties emculweni nasemfashini. Ngaphandle kokuthi ku-club, izingubo azikwazi ukukhuluma ngokungagwegwesi njengoba ngezinye izikhathi ufuna amantombazane amancane namnandi. Kodwa bavinjelwa uhlaka lwamasiko omphakathi. Futhi umzabalazo phakathi kwezifiso kanye nezifiso njalo uphela ngokunqoba kwalokhu okulandelayo. Kuphela kumaqembu ongawunika amaphupho akho mahhala.
Izinhlobonhlobo zezinketho zokugqoka i-club zihlanganisa nesifiso sobuhle nenduduzo. Akufanele ukuvimbela ukunyakaza ngesikhathi sokudansa noma noma yikuphi ukugubha. Amaqembu okwamanje agcwele ukunyakaza okusebenzayo, ngakho izingubo kumele zihlangabezane nale mfuneko yabahlanganyeli kulawo maqembu.
Izitayela zokugqoka zezinkampani zabesifazane zihluke kakhulu, lezi zigqoko ezincane, zama-maxi, nezide eziphakathi. Izambatho ezincane zenzelwe ukugcizelela ubuhle besifazane futhi zivumele ukuba zibone kuwo wonke amadoda afisa. Ngisho nokusika okunzima kakhulu kwalesi sigqoko akufanele ukufihla umzimba wesifazane. Lesi sigqoko sizohambisana nalabo abafuna ukukhombisa isibalo sabo kubantu.
Uma ungafuni ukugqoka i-mini, khona-ke kuwe kukhona ukukhethwa okukhulu kwezingubo zokuphakama okuphakathi nokuphakama. Naphezu kwemibono evelele, kuleso sigqoko akunakwenzeka okungafani nokukhangisa kunalokho okuncane. Qinisekisa ukuthi lokhu akulula. Ngokuyinhloko, lezi zigqoke ngokuvuleka, ukugxila okujulile nokwehla ezinkalweni, umlenze wakho ubheka kulokhu okubonakalayo kunqamuke kakhulu futhi kukhangayo. Izembatho ezinde zingagcizelela ngokucacile lesi sibalo, futhi ugxilise ngokucophelela ukunakekelwa kwengxenye okumele uyiqhenye ngokufanele. Imilenze emihle emide, emgqeni onemuva, emuva kwesifuba esihle.
Futhi, izingubo zeqembu zingabandakanya izingubo, amahembe, izembatho ngesitayela esivamile noma cishe ingubo yezemidlalo yokugqoka. izingubo ezifanayo zingagqunywa kunoma yisiphi isizini futhi zifuna njalo. Naphezu kwesitayela sayo esincane, ukuhlukahluka kwezinkampani zokugqoka okunjalo kungahlotshiswe nge-lace noma ama-frills angalindelekile.
Izinto ezigqoka izingubo zezinkampani zendabuko zingase zingalindelekile kakhulu. Lokhu kungaba kanye nosilika ojwayelekile, i-satin noma i-velvet, futhi mhlawumbe i-nylon, isikhumba, i-latex noma inhlanganisela yabo. Lezi zembatho zibukeka kahle ngezicathulo ezingenasiteji noma izithende eziphakeme. Futhi vumela impilo ejwayelekile esingenakukwazi ukuyichitha usuku lonke ku-hairpin yezinwele eziyishumi nambili, khona-ke ku-club kuzoba kuhle kakhulu. Into eyinhloko ukuthi izicathulo zakho zikhululekile futhi zikhululekile.
Manje enye yezengezo ezifashisayo ezembathweni zezinkampani zabesifazane kubhekwa njenge-corset. Kungaba into ehlukile noma ukufakwa kwe-corset kugobe. I-corset ingahlotshwa ngezingubo zokugqoka kanye nokuhlobisa, igcizelela ngokuphelele ukuqina nokuqina. I-corset emigqokweni yesikhumba ivumela ukudala isithombe esicacile, nesothando esingabukeki.
Ngokuvamile izingubo zokugqoka zifakiwe futhi zikhona izesekeli ezingaba isikhathi eside, kuze kube yizigqoko ze-velvet noma i-latex, zingase zibe namagundane amancane wezintambo ezinamapayipi, amabhande amakhulu akhanyayo, amancane, ama-scarves-stoles, izikhwama ezincane ze-clutch. Konke lokhu kuyadingeka ukwakha isithombe esinefesimali nesidumekayo, okudingekayo ukuze uvumelane kahle neqembu leqembu.
Izinto ezingu-10 ezingaphumi emfashini
Umhlahlandlela wokuthengisa: TOP-3 izitolo inthanethi ngamanani amnandi ehlobo
I-Autumn yezemidlalo: I-Ivy Park Fall 2016 Collection
Isigqoko sowesifazane emva kweminyaka engamashumi amane
Amanani omndeni emphakathini wanamuhla
Umfutho wegazi ophansi lapho ukhulelwa
Okufanele ukwenze ngesikhathi sokungcebeleka kwengane
I-Easter inhle kakhulu
Indlela yokusinda ku-PMS?
I-Chile enomsoco nesiphuzo
Ukulungiselela umshado, okudingayo ukwazi
Incwadi enhle enobuciko kumuntu
Isitshalo sezokwelapha se-strawberries: kusuka kusiphi esiwusizo?
I-omelette - i-pizza
Indlela yokugcina isithakazelo sobulili somuntu
Ukwelashwa kwamakhambi omuntu wamazinyo
Ama-ceps othosiwe: 3 izindlela zokupheka ezinhle nezithombe
Izakhiwo zokwelapha ze-pollen yembali
I-currant emnyama ebusika noshukela futhi ngaphandle kwayo. Ukupheka kwe-currant emnyama emnyama ebusika efrijini